Fanatanjahantena : Tenisy - Tsarabika
> Lehilahy>Fanatanjahantena : Tenisy
Misy entana 7 isa.
Ity « velo elliptique » ity dia natao mba hikotranana ao an-trano. Tena ilaina indrindra ho an’ireo izay tsy dia manana fotoana betsaka hanaovana fanatanjahan-tena. Manaraka ny fenitra tsara ity fitaovana iry, ary afaka mahavita fikotranana karazany roa. Mafy tsara tsy mora tapaka na mora samba ihany koa anefa.
580 000 Ar
Ireo izay tia sy mankafia ny kotrana, sy ny manabokona dia tena mety aminyireto fitaovana ireto. Misy amin'ny lanjany mifanaraka amin'izay ilaina ary misy fitoerany ihany koa. 2 x0.5kg : 60 000fmg , 2 x 3kg: 370 000fmg (vendu), 2 x 4kg: 450 000fmg, 2 x 5kg: 520 000fmg, 2 x 6kg: 650 000fmg, "Support de rangement des haltères" : 500 000 fmg
2 haltères courts
Ho an'ireo tia mikotrana, sy manabokona, ireto ny fitaovana mety. Fonjam-by na "haltère court" izy ireto. Tena mety indrindra raha hikotrànana milamina ao an-trano, amin'izay fotoana mety aminao. Mora raisina tsy manimba tanana izy ireto, ary tena manaraka ny fenitra tsara amin'ny lanjany. Miaraka anaky roa, izay milanja 12,5 kilao.
Famataranora hafa kely. Fitaratra taktila, kasohana amin'ny tanana ny fomba ampiasaina azy.Tekonolojia vaovao. Mahazaka rano
Seza fikotranana ho an'ny lehilahy sy vehivavy, afahana manao fanazaran-tena ao an-trano. Manakely vatana sy mampihenjana hozatra.Seza miaraka amin'ny vy fikotranana.
420 000 Ar
Seza abdominaux. Azo anaovana fanazaran-tena, manakely sy manamafy kibo.Mety tsara ho an'izay te hitaiza vatana sy hitana "taille" .[Hampitaha vidiny]
129 000 Ar
Pro Conference Hi, Basket de vraie marque